Snapdragon 865 horey ayaa loo soo bandhigay: maxay tahay inay bixiso? | Androidsis
Qualcomm waxay horey u shaacisay processor-keeda ugu awooda badan ilaa maanta, kaasoo loo soo bandhigay inuu yahay midka dhaxlaya kan Snapdragon 855 y 855 Plus. Chipsetka aan ka hadlayno waa kan Snapdragon 865, Cad!
Processor-kan cusubi wuxuu horey u lahaa taariikh rasmi ah oo la bilaabi doono, inkasta oo uusan ahayn mid sax ah. Bilowga sanadka 2020 waxay noqonaysaa mid rasmi ah taleefankii ugu horreeyay ee suuqa laga helo.
Dhammaan wixii ku saabsan Qualcomm Snapdragon 865
Ugu horreyntii, waa in la ogaadaa taas Snapdragon 865 waa Chipset aan ku imaanaynin taageero 5G isku dhafan. Soosaarayaasha doonaya taleefannadooda casriga ahi inay haystaan ​​qalabkan iyo taageerada shabakadda 5G, waa inay sidoo kale iibsadaan Snapdragon X55, oo ah Qualcomm jiilka labaad ee 5G modem. Intaa waxaa dheer, shirkadda Mareykanka waxay u baahan doontaa in OEMs ay sidoo kale soo iibsadaan modemka, sidaas darteed dhammaan mobilada gacanta ku haya processor-ku waxay soo bandhigayaan is-waafajinta shabakadaha 5G iyada oo aan laga reebin, taas oo ka dhigaysa xalka gaarka ah ee waxqabadka sare ee 5G.
Waxaa la shaaciyay inay heysato Kyro 585 cores oo mataleysa 25% kororka xawaaraha iyo waxtarka tamarta, marka loo eego Snapdragon 855, waxaana loo kala jabiyay nidaamka kutlada soo socota:
Kiliyaha-A77: 2,84 GHz processor-ka ugu weyn + 3 x 2,4 GHz processor processor.
Kiliyaha-A55: 4 x CPU-yada loo qoondeeyay waxqabadka 1,8 GHz.
GPU-ga lagu beeray SoC waa Adreno 650, taas oo sidoo kale ka dhigan xawaare 25% ka badan jiilalkii processor-radii hore, iyo 35% kororka waxtarka tamarta. Tan waa in lagu daraa astaamaha sida Elite Gaming, oo diiradda saaraya hagaajinta tayada garaafka iyo bixinta qiyaas badan oo xaqiiqda ku jirta taranka waxyaabaha. Taageerada HDR iyo HDR10 + ee ciyaaraha bandhigyada ilaa heerka 144 Hz cusbooneysiinta ayaa sidoo kale lagu daray. Processor-ka caawiya xitaa sii dheellitirka iyo kor u qaadista waxyaabaha waa Hexagon 698.
ISP ee aan ku aragno jiilkan cusub ayaa ah Spectra 480 ISP. Waxay bixisaa taageero lagu duubo 4K HDR, 8K ama sawirro ilaa 200 megapixels ah. Tani, markeeda, ma matali doonto isticmaalka tamarta muhiimka ah, maaddaama waxtarka Chipset-ka qaybtani ay aad u sarreyso, sidaa darteed ma jiri doono kuleyl ama masiibo kale oo ku timid hawlgalkeeda. Intaa waxaa dheer, waxaa sidoo kale jiri doona taageero duubista mooshin gaabis (dhaqdhaqaaq gaabis ah) oo ah 960 looxkiiba halkii ilbiriqsi ee xallinta sare iyo duubista HDR ee Dolby Vision oo diyaar u ah in lagu arko shaashadaha waaweyn.
Dabcan, si la mid ah kii ka horreeyay, Snapdragon 865 sidoo kale wuxuu awood u leeyahay inuu taageero u fidiyo HDR10 +, 4K HDR fiidiyow qabasho leh oo leh muuqaal sawir leh, iyo ISP oo leh aragti kumbuyuutar.
Sirdoonka macmalka ah waa qeyb kale oo aan lagu iloobin xalkaan cusub ee awooda sare leh, waa cagsi: waa la hagaajiyay. Snapdragon 865 wuxuu la yimaadaa Qualcomm jiilka shanaad ee AI, oo laba jibaar ka xoog badan tii ka horeysay, iyada oo la siinayo wax soo saar dhan 15 tiriliyan hawlgal ilbiriqsi, 3 MB oo ah kaydka nidaamka iyo taageerada LPDDR4 (2.133 MHz) iyo LPDDR5 (2.750 MHz). Mashiinkaan cusub ee AI wuxuu ka sarreeyaa kii ka horreeyay, xagga awood ahaan iyo baaxad ahaan, 35%, oo wax badan sheegaya. Sidaa darteed, ka shaqeynta sawirrada, iyo waxyaabo kale oo badan, aad bay uga wanaagsanaan doontaa, sidaas darteedna waxay noqon doontaa mid aad u sax ah markii la qabanayo qaabka sawirka walxaha si aad u saxan oo ka fiican (waxaan arki doonaa sida tani ay sidoo kale ugu shaqeyso xaaladaha adag) .
Dhinaca kale, habka neerfaha ee loo yaqaan 'SDK' ayaa la cusbooneysiiyey, kaas oo ay weheliso shaqooyinka qaybaha sida AI Model Enhancer iyo Hexagon NN Direct oo siiya horumariyeyaasha xorriyad iyo dabacsanaan weyn si ay u abuuraan codsiyo dhaqso badan oo dhammaystiran (oo la xiriira AI).
Ku saabsan Bluetooth, Tiknoolajiyada 'Qualcomm aptX TM Voice' waxay awood u siineysaa maqal aad u cad, daahitaan hoose, iyo isku xirnaanta maqalka dhagaha wireless-ka, Dhamaan intaad daryeesho isticmaalka tamarta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Snapdragon 865 horey ayaa loo soo bandhigay: maxay tahay inay bixiso?